Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 25)
Meizu M6s: Noocyada noocyada cusub ee bartamaha
Meizu M6s: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabida ayaa la xaqiijiyay. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah nooca Shiinaha.
Naqshadeynta iyo qeexitaanka suurtagalka ah iyo qiimaha Alcatel 3V
Alcatel 3V waxaa lagu arkay Bandhigga Macaamiisha Elektiroonigga (2018) ee Las Vegas, in kasta oo qeexitaankiisa iyo astaamahiisa aan rasmi laga dhigin, waana taas sababta xanta badan ay uga soo baxeen iyaga. Waan kuu sheegeynaa!
Huawei P Smart: Qeexitaannada la xaqiijiyay ee bartan-ballaadhan oo rajo leh
Huawei P Smart: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista ayaa la xaqiijiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefankan dhexdhexaadka ah ee suuqa soo gali doona laba toddobaad kadib.
Dhamaan buug-yaraha Motorola ee sanadka 2018 waa la sifeeyey
Warkii ugu horreeyay ee casaanka ee sanadka, qof ka tirsan shirkadda Motorola ayaa khiyaameeyay oo siidaayay dhammaan kaydka suurtagalka ah ee shirkadda ee sanadkan.
Hoyga TV-ga Android TV wuxuu si rasmi ah ugu yimaadaa Google Play
Hoyga TV-ga ee Android ayaa hadda laga heli karaa Google Play. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan noocaan doonaya inuu keeno Android Oreo telefishanka.
Maamulaha LG wuxuu codsan lahaa inuu dib u sameeyo LG G7 oo aan laga soo bilaabin
Maamulaha LG wuxuu rabaa inuu dib u cusbooneysiiyo LG G7 oo laga soo bilaabo xoq. Wax badan ka ogow dhibaatooyinka ay hadda shirkaddu la kulanto.
Sawirkii ugu horreeyay ee xaday ee Moto E5
Motorola / Lenovo Moto E5 wuxuu ka soo muuqday muuqaal xaday markii hore, waxaan haynaa faahfaahinta aan soo ogaannay iyo astaamaha suuragalka ah
Samsung Galaxy A8 (2018) horey ayaa looga iibiyay dalka Spain
Samsung Galaxy A8 (2018) ayaa horeyba loogu iibin karaa shirkadaha taleefannada Movistar iyo Vodafone ee Spain qiyaastii 499 euro iyo 479.99 euro siday u kala horreeyaan. Waxaan kuu fidineynaa warka!
Ku Xeran Qaabka 41: Saacadda cusub ee ka socota TAG Heuer
Iskuxidhan Qaabka 41: TAG Heuer wuxuu soo bandhigayaa smartwatch yar. Ka raadi wax badan oo ku saabsan smartwatch-ka cusub ee caanka ah.
La kulan Arirang 151, Android ee Waqooyiga Kuuriya
Waqooyiga Kuuriya, inkasta oo ay yihiin kali-talisnimo iyo wada-shaqeyn, waxay sidoo kale ku raaxaystaan ​​taleefannada casriga ah inta ugu badan ee aan samaynno, Yves waxay leeyihiin Arirang 151, moobiil Android ah oo lagu qalabeeyay dhowr barnaamijyo xiise leh iyo qeexitaanno dhexdhexaad ah oo aasaasi ah, laakiin shaqeynaya. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Sony Xperia XA2, XA2 Ultra iyo Xperia L2 ayaa hadda loo heli karaa horay loogu sii dalbado BestBuy
Telefoonada lagu shaaciyay Bandhigga Macaamiisha Elektaroniga ee Las Vegas, Sony Xeperia XA2, the XA2 Ultra iyo L2, ayaa diyaar u ah in horay loo sii dalbado BestBuy, waxaana si rasmi ah loo bilaabi doonaa Febraayo 16.
Xiaomi Redmi Note 5A waxay iibisaa in kabadan 1 milyan oo unug bil gudaheed
Xiaomi Redmi Note 5A waxay iibisaa in kabadan hal milyan oo unug bil gudaheed. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka dhamaadka-hooseeya ee sumadda Shiinaha
HMD waxay heshay xuquuqda Caasha
HMD waxay heshay xuquuqda dhammaan alaabooyinka Nokia ee taxanaha Asha, oo ah nooc ay horay u lahayd Microsoft. Shirkaddan Finishka ah ayaa mas'uul ka noqon doonta suuqgeynta kooxahaan heerka hoose ku dambeeya. Waan kuu sheegeynaa!
HTC U11 EYEs: Nooca dhexe ee cusub ee shirkadda Taiwanese
HTC U11 EYE: Faahfaahinta iyo sawirrada bartamaha cusub. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bartamaha-dhexe ee noocyada Taiwan ee la soo bandhigo Isniintaan.
Maze Alpha iyo Comet ayaa lagu iibinayaa GearBest iyo eBay
Maze Alpha 4G iyo Comet ayaa lagu iibinayaa GearBest iyo Ebay siday u kala horreeyaan. Qalabkan heerka dhexe ah ayaa la iibin doonaa wakhti kooban. Ka faaideyso!
Nokia 8 wuxuu helayaa mid ka mid ah dhibcaha ugu xumaa ee DxOMark
Kaamiradda Nokia 8 ayaa si liidata uga dhibco DxOMark. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan falanqeyntan iyo asal ahaan dhibcahan xun.
Daahfurka iyo dareenka ugu horreeya ee Ila X, isku xirka iPhone X wax ka yar 100 Euros
Halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa sanduuqii sanduuqa iyo dareenkii ugu horreeyay ee Ila X, mid kale oo ka mid ah iPhone X oo ka yar 100 Euros.
Ku raaxayso qiimo dhimista alaabooyinka Xiaomi ee Light in the Box
Ku raaxayso qiimo dhimista alaabooyinka Xiaomi ee Light in the Box. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qiimo dhimista ku saabsan noocyada waaweyn ee Aasiya ee dukaanka ku yaal.
HOMTOM: S12 taleefanka gacanta ee ugu raqiisan 18: 9 suuqa
HOMTOM: S12 Taleefanka casriga ah ee ugu raqiisan shaashadda 18: 9 ee suuqa taal. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefankan u muuqda shaashaddiisa iyo qiime jaban.
Alcatel 3C: Tilmaamaha iyo sawirradii ugu horreeyay ee xaday
Alcatel 3C: Qeexitaannada iyo sawirrada rasmiga ah ayaa xaday. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi magaca Faransiiska ee imanaya sannadkan.
OnePlus wuxuu soo bandhigi doonaa taleefankiisa cusub dhamaadka rubuca labaad
Telefoonka cusub ee OnePlus wuxuu imaan doonaa dhamaadka rubuca labaad. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi astaanta Shiinaha ee imaan doonta bisha Juun.
Ka hel Blackview A10 kaliya $ 88.99 halkii aad ka heli lahayd $ 130.39 at Cafago!
Blackview A10 wuxuu ku yaalaa iib aan caadi aheyn Cafago, waxaadna kuheli kartaa kaliya $ 88.99 halkii aad kaheli laheyd $ 130.39 oo ah qiimaheeda bilowga oo wata lambarka kuuboon. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta!
Blocks: Aaladda casriga ah ee casriga ah ee 'Android' oo horeyba loo iibiyay
Blocks: Qalabka casriga ah ee casriga ah ee 'Android smartwatch' ayaa durba run ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan saacadda ugu horreysa ee qaab-dhismeedka ah si aad ugu timaaddo Android moodelkan.
Oukitel K10 Faahfaahinta Ugu Dambeysa
Toddobaadyo badan oo xan iyo sugitaan ah kadib, shirkadda Okitel waxay aakhirkii soo saartay qeexitaannada, astaamaha iyo qiimaha Oukitel K10000, oo ah terminal leh batari dhan 11.000 mAh.
Xiaomi iyo Oppo waxay lahaan doonaan furitaanka wajiga ee iPhone X
Xiaomi iyo Oppo waxay lahaan doonaan Aqoonsiga Face-ka ee iPhone X. Faahfaahin intaa ka badan ka ogow go’aanka labada shirkadood ee u oggolaanaya inay adeegsadaan tikniyoolajiyaddan.
Ku hel Xiaomi Mi 5S Plus kaliya $ 271.17 halkii aad ka heli lahayd $ 399.99 Banggood
Xiaomu Mi 5S Plus wuxuu ku jiraa dalab aan la aqbali karin oo gaaraya illaa 32% qiimo dhimis Banggood. Waxaad ku heli kartaa oo keliya $ 271.17 halkii aad ka heli lahayd $ 399.99 ee sicirkeedii asalka ahaa. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta!
Xaqiijiyay: Galaxy S9 waxaa la soo bandhigi doonaa bisha Febraayo
Xaqiijiyay: Galaxy S9 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa bisha Febraayo. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigidda ee Samsung-dhamaadka sare.
Kuwani waa saacadaha cusub ee Android Wear lagu soo bandhigay CES 2018
CES 2018: La kulan saacadaha cusub ee wata 'Android Wear'. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan smartwatches-ka cusub ee lagu soo bandhigay CES 2018.
Sony waxay kaga dhawaaqeysaa dhagaha samaacadaha cusub xarunta CES ee Las Vegas
Sony, oo ah shirkad caalami ah oo reer Japan ah, kama uusan fogeyn xarunta CES ee Las Vegas. Waxyaabaha ugu dambeeyay ee lagu soo bandhigay shirweynahan, waxaan kaheleynaa afar dhagaha dhagaha ee cajiibka ah.
Samsung waxay bilaabi laheyd soo saarista taleefankeeda casriga ah ee nugul bisha Nofeembar
Samsung ayaa bilaabi doonta soo saarida taleefanka jilicsan bisha Nofembar. Ka hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qorshooyinka shirkadda taleefankeeda jilicsan.
Samsung Galaxy On7 Prime wuxuu si dhakhso ah uga iibin doonaa Amazon India
Samsung Galaxy On7 Prime waxaa laga heli doonaa iibka Amazon India wax yar ka dib. Laga soo bilaabo halkan Androidsis, waxaan haynaa dhammaan faahfaahinta iyo qeexitaannada uu leeyahay terminaalkani.
Alcatel Taxanaha 1, 3 iyo 5: Moodooyinka cusub ee Alcatel ayaa lagu soo bandhigay CES 2018
CES 2018: Alcatel wuxuu soo bandhigayaa taxanaha cusub ee 1,3 iyo 5. Ka ogow wax badan oo ku saabsan safafka cusub ee taleefannada laga helo nooca Faransiiska ee imanaya sannadkan.
Galaxy J2 Pro (2018) wuxuu si rasmi ah uga muuqdaa websaydhka Samsung Vietnam
Ka dib markii Galaxy J2 Pro (2018) uu siideeyay dhowr toddobaad ka hor, maanta waxay si rasmi ah uga muuqataa bogga Samsung ee Vientam, ogow dhammaan faahfaahinteeda.
Xiaomi Mi A1 oo wata Android Oreo waxaa ku dhaca fashil badan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhibaatooyinka uu cusbooneysiinta ku sababay taleefankaaga.
Leagoo 2018 Carnival wuxuu noogu keenayaa qiimo dhimis sedex taleefan GearBest
Leagoo wuxuu dhigayaa seddex ka mid ah terminaalkiisa ugu caansan iibka GearBest. Kuwani waa Leagoo KICAA MIX, T5 iyo T5C, saddex mobiil oo dhexdhexaad ah oo aadan ka maqnaan karin.
Oukitel U18, taleefanka casriga ah ee ka socda shirkadda Aasiya ee dhiirrigelisay shaashadda iPhone X
Shirkadda Aasiya waxay si rasmi ah u soo bandhigtay Oukitel U18, oo ah taleefan casri ah oo ay dhiirrigelisay iPhone X waana tan na siineysa sunnayaasha dabeecadda leh ee moodelkan kore ee shaashadda.
Hel 6GB RAM MAZE Alpha X oo laga dhimay GearBest
Maze Alpha X oo leh 6GB oo RAM ah iyo 128GB oo keyd ah ayaa laga heli karaa GearBest oo ah qiimo dhimis 20% ah, taas oo ka dhigeysa kaliya $ 249.99. Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta ololahan aan la oggolaan karin!
OUKITEL K10 oo wata 11.000 mAh baytariya ayaa na siisa 21 saacadood oo fiidiyoow ah oo aan kala go ’lahayn
OUKITEL K10 waa terminal na siiya 11.000 mAh baytariga, baytariga aan ku ciyaari karno fiidiyowyada anoo ka duulayna iftiinka ugu badan iyo codka muddo ka badan 21 saacadood.
Huawei Mate 10 Pro wuxuu imaan doonaa Mareykanka bishaan Janaayo 9deeda
Huawei wuxuu joogi doonaa CES ee Las Vegas iyadoo la socota Huawei Mate 10 Pro, oo ah taleefan si rasmi ah u imaan doona Mareykanka Talaadadan, Janaayo 9.
Noocyada Nokia 3310 4G ayaa shaaca laga qaaday
Faahfaahin buuxda ee Nokia 3310 4G ayaa shaaca laga qaaday. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan nooca cusub ee aaladda oo dhowaan suuqa soo galaysa.
Patent cusub oo ku saabsan bandhigyada jilicsan ee Samsung
Patent cusub ka diiwaan gashan Samsung augurs shaashado jilicsan oo ku qalabeysan tiknoolajiyad xasaasi ah. Muddo intee le'eg ayaan sugeynaa inaan la kulanno iyaga?
Meizu mBlu S6 (M6S) wuxuu marayaa TENAA wuxuuna soo bandhigayaa qaar ka mid ah qeexitaankiisa
Meizu mBlu S6 waxaa lagu arki karaa TENAA, oo muujineysa qaar ka mid ah astaamaheeda iyo qeexitaankiisa la barbardhigi karo kuwa Xiaomi Redmi 5. Dhamaantiin waan kuu sheegi doonaa!
Dhibaatooyinka dhaqdhaqaaqyada ee shaashadaha Google Pixel 2 iyo Pixel 2 XL
Tilmaamayaasha shaashadaha Pixel 2 iyo Pixel 2 XL ayaa siinaya dadka isticmaala dhibaatooyinka, wax badan ka ogow cilladaha iyo asalkooda.
Choetech T520: Xeedho wireless tayo leh oo ka yar 20 euro
Choetech T520: xeedho iyo tayo xeedho tayo leh. Raadi wax badan oo ku saabsan xeedho wireless-ka oo u taagan qiimaheeda hoose.
Ka faa'iideyso gorgortanka ku jira taleefannada casriga ah iyo shaashadda Gearbest
Qiimo-dhimista taleefannada casriga ah iyo tikniyoolajiyadda ee 'Gearbest' Ka ogow wax badan oo ku saabsan qiimo dhimista uu dukaanka caanka ahi noogu keeno si gaar ah.
Basaasinta Shiinaha ee Adups ayaa markale la ogaaday Android
Adups: Basaas Shiineys ah ayaa markale laga ogaaday Android. Waxbadan ka ogow basaaskan ku dhacay Android sanadkii hore.
Haddii aad qorsheyneyso inaad cusbooneysiiso kaniinigaagii hore Kirismaskan, qodobkaan waxaan ku tusaynaa kiniiniyada ugu fiican xilligan ay maamusho Android
Liiska buuxa ee smartwatches ee cusbooneysiiya Android Oreo. Soo ogow liiska ay shaaca ka qaaday Google oo leh moodooyinka cusbooneysiin doona.
Android Oreo waxay u timaadaa inay daawato Android Wear 2
Android Wear 2.0 ayaa daawanaya cusbooneysiinta Android Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta smartwatches nooca cusub.
Gorgortannada tiknoolajiyadeed ee ugu wanaagsan TomTop
Ka faa'iideyso gorgortanka tikniyoolajiyadda ugu fiican TomTop. Ka ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan dhiirrigelinta wax soo saarka tiknoolajiyada TomTop.
Ka faa'iideyso qiimo dhimista taleefannada casriga ah iyo kaararka xusuusta ee Light in the Box
Waxay ku bixisaa taleefannada casriga ah ee Xiaomi iyo kaararka xusuusta ee Light. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qiimo-dhimista uu dukaanka caanka ahi noo keeno.
Dib u eegida Leagoo S8, waa terminal aad u dhameystiran oo wax kabadan 100 euro
Leagoo wuxuu na siiyaa S8, oo ah terminal wax kabadan 100 euro waana mida na siisa astaamo aad u xiiso badan oo qiimo aad u macquul ah leh.
Ka faa'iideyso qiimo dhimista 'Cyber ​​Monday' 2017 ee Iftiinka Sanduuqa
Ka faa'iideyso qiimo dhimista 'Cyber ​​Monday' 2017 ee Iftiinka Sanduuqa. Ha seegin dhimisyadan weyn ee Cyber ​​Monday.
Razer Telefoon si loo helo kaamiro waaweyn iyo hagaajinta waxqabadka
Telefoonka 'Razer Phone' ayaa suuqa ku soo galay tayo la'aan la'aanta kaamerada, dhibaato ayaa lagu xallin doonaa soo saaraha goor dhow.
Tizen 3.0 wuxuu bilaabaa inuu yimaado Samsung Gear S3
Samsung ayaa hadda bilowday inay cusbooneysiiso cusbooneysiin cusub oo ku saabsan nidaamkeeda hawlgalka ee Samsung Gear S3.
Heshiisyada ugufiican ee taleefannada casriga ah iyo diyaaradaha drones ee loogu talagalay Jimcaha Madow ee TomTop
Heshiisyada ugufiican ee casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'Dron drones' ee loogu talagalay Blackfriday at Tomtop. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dallacaadaha Jimcaha Madow TomTop.
Ka faa'iideyso dallacaaddan oo ku hel Leagoo T5c $ 1,99 oo keliya
Si loogu dabaaldego daahfurka soo socda ee Leagoo T5c, ragga ka socda Leagoo waxay ku mashquulsan yihiin shan iibsasho qiimo dhan $ 1,99.
MediaTek waxay ku dhawaaqeysaa inay diirada saari doonto bartamaha dhexe iyo hoose
Ka dib markii lagu dhawaaqay Qualcomm MediaTek ayaa hada ku dhawaaqday inay joojinayso maalgashiga processor-yada sare, si diirada loo saaro bartamaha iyo heerka hoose
NichePhone-S: Moobilka Android-ka ah cabbirka kaarka deynta
Shirkadda Jaban, FutureModel, ayaa noo keenta NichePhone-S, terminal yar yar sida kaar leh astaamo u qalma taleefannada casriga ah.
Ha moogaanin qiimo dhimista 11.11 ee laga heli karo TomTop
Qiima dhimista ugu wanaagsan 11.11 ee laga heli karo TomTop. Ha moogaanin qiimo dhimisyadan gaarka ah ee dukaanka caanka ah.
3 Soo Bandhigid Aan Loodiidi Karin Oo Ku Saabsan Geekbuying Si Loogu Dabaaldego 11.11, Maalinta Kali Ee Shiinaha
Halkan waxaa ah 3 dalabyo aan la diidi karin oo ku saabsan Geekbuying si loogu dabbaaldego 11.11/3 ama Maalinta Kali ee Shiinaha, XNUMX dalab oo aadan seegi karin.
Ka faa'iideyso dalabyada 11-11 oo aad u hesho Leagoo gebi ahaanba bilaash ah
11-ka Noofeembar, Leagoo wuxuu kala iibsan doonaa 5 iibsi oo bilaash ah dadka isticmaala ee iibsada nooc kasta oo moodooyinkooda ah taariikhdaas.
Dib u eegista Vernee Thor Plus
Falanqeyn dhammaystiran oo dhammaystiran oo ku saabsan Vernee Thor Plus ka dib toddobaad dheer oo si xoog leh loo isticmaalayay boosteejada oo ah terminalkeyga shaqsiyeed ee isticmaalka maalinlaha ah.
Kiniiniyada Qiimaha ugu Fiican 2017: Noocyada 7-Inch iyo 10-Inch
Waxaan kuu soo bandhigeynaa dusha sare oo kooban qaar ka mid ah kiniinnada ugu fiican 10 iyo 7-inji suuqa, oo ay ku jiraan qeexitaankooda farsamo iyo qiimahooda.